Milalaova New mpilalao only.Maximum fiovam-po £ 20.Selected Slots Only.Sms Validation Required.No petra-bola Required.100x Wagering T's&C's
Maro ny lalao Casino slot mifototra amin'ny lohahevitra isan-karazany, fa tanàna Hong Kong Tower no tsara indrindra slots ambony UK toerana lalao. Ity lalao ity dia manana dimy reels, 3 andalana sy ny 99 betways afaka mandresy avy. Ny foto-kevitry Mifototra amin'ny tanàna ny tilikambo avo indrindra telo nisolo tena maoderina Shina. The reels no mpifehy ny fijery ny manga-jiro tilikambo amin'ny maizina alina. Ny tanàna toa zava-mahagaga avy izay avo sy ny feon'ny arabe be atao amin'ny tsio-drivotra mangatsiatsiaka rivotra manome azo mihevitra. Ny lalao dia manomboka amin'ny sarimihetsika tahaka ny fampidirana amin'ny sary mahafinaritra vokatry. Ny hilokana dia manomboka amin'ny 20p isan-kofehy ireny ary afaka misafidy avy amin'ny anaram-piangonana isan-karazany ka ny £ 100.
Momba ny developer ny Hong Kong Tower
Elk no developer ity tilikambo mijoalajoala mifototra slots ambony UK toerana lalao, ny famoronana slots mpamoron-javatra an-tserasera. Ny lalao rehetra efa nahazo laza be isan-karazany avy amin'ny mpampiasa amin'ny toerana isan-karazany amin'ny aterineto Casino. Playable izy ireo tamin'ny finday ary koa ny solosaina rafitra.
Ny lalao dia manana sary manaitra ny sasany amin'ny marika maro loko mba hahatonga ny reels manintona mijery. Misy marika ny diamondra, bonsai fototra, voninkazo mavokely lota sy volamena nopetahany takela 7. Ny farany ny anankiray avy tany an-tampon'ny lisitra dia payout mariky ity slots ambony UK toerana lalao. Afaka mandresy ny ho 1500 Fantsiho amin'ny hazo fijaliana indraindray ny dimy ny karazany eo amin'ny mavitrika paylines. Misy dimy marika kisendrasendra Shinoa izay mandoa ny lalao ambany sarobidy ny vola madinika ny 80x tsirairay. Misy telo marika manokana izay hampavitrika ny tombony mampiavaka ny lalao. Izy ireo mena sy manga Yin yangs miaraka amin'ny lalao ny famantarana.
Mystery Feature: Ny famantarana ny lalao dia ny zava-miafina sy toa mariky rehetra reels. Ity marika stacked afaka miseho tanteraka ny reels ihany koa. Ny zava-miafina rehetra fanehoana an'ohatra mampiseho an-misy base mariky manokana. Raha tsorina dia, manao izany toy ny mariky ny bibidia sy manampy anao handresy miaraka bebe kokoa tsikombakomba. Raha marika hita ho manga Yin-Yang avy eo dia zava-dehibe toy ny fanehoana an'ohatra tombony dimy.
Bonus Level: ao amin'io slots ambony UK toerana lalao rehefa 3, 4 na 5 mena Yin-yangs hita, tonga any amin'ny tombony manodidina. Misy kodiarana telo ny lanitra toerana an-tampon'ny tilikambo telo. Isan-karazany tsirairay dia manana isa kodia ny Bet multipliers manomboka avy 200 tao amin'ny kodiarana aloha ny 50000 in fahatelo kodia. Handroso ambaratonga tsirairay, tsy maintsy tanety ny zana-tsipìka eo amin'ny kodia dia manondro manaraka kodia.
izany slots ambony UK toerana lalao dia manana tombony lafin-javatra mahavariana izay mamela anao handresy valisoa goavana. Ny RTP eto 96.3% izay ara-drariny ho an'ny karazana tsy hahasoa anareo afaka.
UK Slots sy Casino Games, More Posts:
UK Slots tombontsoa Online – Play dia Hahazo amin'ny £ 5…
Merlin ny Magic Nolavina
Filokana tompon'andraikitra Trust
Casino.Uk.com dia Powered by Nektan (Gibraltar) Voafetra ny orinasa voarakitra ao Gibraltar. Nektan ny fahazoan-dalana sy nifehy ny Filokana Commission (Faha-000-039107-R-319400-013) ho an'ny mpanjifa any Grande-Bretagne sy fahazoan-dalana avy amin'ny governemanta Gibraltar sy nifehy ny Gibraltar Filokana Commission (RGL tsy.054) ho an'ny mpanjifa hafa rehetra.